connector ပစ္စည်းကိရိယာ, အော်တို connector, မော်တော်ကား connector, လေကြောင်း connector - YC
Dongguan Yuechuang Automation Equipment Co. , Ltd (YC) 2007 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် connector ကိုပရိသစက်နှင့် Non-စံစည်းဝေးပွဲကိုအလိုအလျောက်စက်နှင့်ကိရိယာ R & D, ဒီဇိုင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်း, တပ်ဆင်ခြင်း, ညှိနှိုင်းမှုကိုအထူးပြုနေတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး , တဦးတည်းအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများ, လမ်းမကြီးယန်ယန်သိပ္ပံပန်းခြံ, ဂိတ်ငါးခုအောင်မင်း Chang ကလမ်း, Humen မြို့တံခါး, DongGuan စီးတီး, တရုတ်အပေါ်တည်ရှိပါတယ်။
ယူ Chuang မော်တော်ကား connector ကိုအလိုအလျှောက်စုဝေးမှုစက်ပေးသွင်းဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် 10years အကြောင်းကိုကြွယ်ဝသော experienceis ရှိသည်, တစ်ခု, အသိဉာဏ်အကျိုးရှိစွာနှင့်တည်ငြိမ်ထုတ်ကုန်အယူအဆအတွက်တင်းကြပ်စွာကိုယ်ပိုင်ကားတစ်စီး connector ကိုပရိသစက်အလိုအလျောက်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ပေး, ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ် ထုတ်လုပ်မှုကားတစ်စီး connector ကို၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း, connector ကိုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအဆင့်မြှင့်လုပ်ဖို့ထုတ်လုပ်သူအထောက်အကူပြုစေရန်, မိုးသည်းထန်စွာလက်စွဲစာအုပ်အလုပ်သမား, ထိုရိုးရှင်းသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တည်ငြိမ်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး, ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, မော်တော်ကား connector ကို manufacturers'production ထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်နှင့်ရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ယှဉ်ပြိုင် ...
(1) ယူ Chuang 10 နှစ်များအတွက်သုတေသန, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့် connector ကိုအလိုအလျောက်ကိရိယာများ၏ရောင်းအားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တစ်ခုအတွေ့အကြုံရှိအင်ဂျင်နီယာဖှံ့ဖွိုးတိုးအဖွဲ့ရှိပါတယ်။
Rhode Island ရှိ Interplex နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစက်ရုံ
80%! ကို T-ကားတစ်စီးနှင့်အတူပြည်တွင်းနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများသူရဲကောင်း - Gaopin အလိုအလျောက်
တစ်ခုလုံးကိုမော်တော်ယာဉ်စျေးကွက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်, Turbo Boost ပို. ပို. ပင်မလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာနေသည်။ မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအားလုံးကို "T က" နဲ့တပ်ဆင်ထားကြသည်။
DSM ကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနိုင် 30% တစ်ဖန်ဖိုင်ဘာအကြောင်းအရာနှင့်အတူသစ်တစ်ခု Hydrolysis-ခံနိုင်ရည် PBT လွှတ်တင် ...
ကျန်းမာရေး, အာဟာရနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပစ္စည်းများများ၏နယ်ပယ်များတွင်တက်ကြွစွာသောဒတ်ခ်ျတော်ဝင် DSM Group မှ, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအပေါ်အခြေခံပြီး ...